0 Tuesday September 21, 2021 - 11:01:12
Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday in ay fashilisay isku day inqilaab melleteri oo ay sameeyeen Jeneraallo katirsanaa nidaamkii cumar Xasan Al Bashiir.
0 Tuesday September 14, 2021 - 13:17:55
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa ku dhawaaqday in liiska waxa loogu yeero argagaxisada ay kudartay ganacsato iyo shirkado waaweyn oo xarumo ku leh wadankaasi.
0 Saturday September 11, 2021 - 15:21:06
Maanta oo ah sabti Taariikhduna Ku Beegantahay 11 September waxay ku astaysantahay xilligii ay dhaceen weeraradii New York iyo Washington oo lagu naafeeyay dhaqaalaha dowladda Mareykanka.
0 Thursday September 09, 2021 - 16:55:31
Kulan degdeg ah oo dowladaha dhaca galbeedka qaaradda Afrika ay ka yeesheen xaaladda dalka Gini ayay kasoo saareen go'aanno ka dhan ah saraakiisha Inqilaabka sameeyay.
0 Monday September 06, 2021 - 10:19:00
Waxaa soo gaba gaboobay dagaallo culus oo lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday mid kamida gobollada dalka Afghanistan.
0 Sunday September 05, 2021 - 17:08:56
Ciidamada Imaarada Islaamiga ah ayaa guulo waaweyn kasoo hooyay dagaalka culus ee ka socda gobolka kaliya ee ku jiray gacanta cadowga.
0 Friday September 03, 2021 - 13:31:12
War kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu beeniyey hadalkii kasoo yeeray hay'ada sirdoonka DFS ee ahaa in Xarakadu ay ka dambeeysay afduubkii iyo dilkii lagula kacay Ikraan Tahliil oo ahayd Sarkaalad u shaqeyneysay hay'adda NISA.
0 Wednesday September 01, 2021 - 09:00:28
Dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Afghanistan waxaa ka socda dabaal degyo ay dhigayaan malaayiin ruux kuwaas oo ay ku muujinayaan guusha ay ka gaareen dagaalkii lalasoo galay Mareykanka.
0 Monday August 30, 2021 - 12:33:17
Khasaara lixaad leh ayaa melleteriga Yemen kasoo gaaray weerar culus oo wakiillada Iiraan ay labeegsadeen saldhig kuyaal Koonfurta wadankaasi.
0 Saturday August 28, 2021 - 09:20:01
Wararka ka imaanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in markale weerar hubaysan lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidanka Mareykanka ee kuyaal wadankaasi.
0 Wednesday August 25, 2021 - 12:11:28
Hoggaamiye jihaadi ah oo caan ka ah wadanka Afghanistan ayaa noqday sii haya wasiirka difaaca Imaarada Islaamiga ah arrinkaas oo si aad ah loo hadal hayo.
0 Monday August 23, 2021 - 17:52:23
Indhaha ayaa lagu wada hayaa dowladda cusub ee ka dhismi doonto wadanka Afghanistan 20 sano kadib markii ay Mareykanku duullaan gardarra ah ku qaadeen wadankaasi.
0 Monday August 23, 2021 - 11:49:14
Wararka ka imaanaya Afghanistan ayaa sheegaya in dagaallo culus kadib ay ciidamada Imaarada Islaamiga ah dib ula wareegeen degmooyin ay dhowaan soo galeen ciidamo katirsanaa maamulkii hore.
0 Sunday August 22, 2021 - 16:36:52
Ugu yaraan sedax qof ayaa ku dhintay rasaas hor leh oo ka dhacday madaarka magaalada kaabuul halkaas oo ay ku suganyihiin kumanaan dad ah oo ubadan cumaladii la shaqeynayay ciidamada shisheeye.
0 Thursday August 19, 2021 - 09:42:38
Uhuru Kenyatta ayaa markale bandaw kusoo rogay dhammaan gobollada dalka Kenya arrinkaas oo hoos udhac weyn ukeenaya dhaqaalaha wadanka.
0 Tuesday August 17, 2021 - 17:19:32
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaallo culus oo maanta markale dib uga qarxay deegaanno dhaca Koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
0 Tuesday August 17, 2021 - 16:44:30
Madaxweynaha Mareykanka ayaa xalay jeediyay khudbad uu uga hadlayay isbedelka ka dhacay Afghanistan iyo dagaalkii ay ciidamadiisu ka galeen wadankaasi.
0 Tuesday August 17, 2021 - 13:44:24
Dowladaha reergalbeedka gaar ahaan Mareykanka ayaa si xun loogu jebiyay duullaankii ay 20 sana ka hor ku qaadeen dalka Afghanistan.
0 Monday August 16, 2021 - 15:35:40
Indhaha caalamka ayaa kusii jeeda wadanka Afghanistan oo furashooyin taariikhi ah ay ka sameeyeen ciidamada imaarada Islaamiga ah.
Taliban oo Waali cusub u magacaawday magaalada Kaabuul [Warbixin].
0 Monday August 16, 2021 - 15:11:46
Hoggaanka sare ee Imaarada Islaamiga ah ayaa maamul cusub u magacaabay wilaayada Kaabuul ee dalka Afghanistan.
0 Thursday August 12, 2021 - 09:55:08
Sanad Cusub oo usoo galay Muslimiinta Caalamka 1443 Hijri [Warbixin].
0 Tuesday August 10, 2021 - 10:38:23
Maanta oo Isniin ah 10,Agoosto,2021 waxay ku beegantahay 1,1,1443 Hijri waxaana muslimiinta usoo galay sanad cusub kadib markii ay dhameysteen sanaddii 1442 Hijri.
Ciidamada Imaarada Islaamiga ah oo saacado gudahood qabsaday 5 magaalo oo muhiim ah.
0 Sunday August 08, 2021 - 17:17:06
sidii tusbax go'ay oo kale ayay usii kala daadanayaan ciidamada xukuumadda camiilka kaabuul kuwaas oo dowladda Mareykanka ay tabbaarro iyo tabantaabooyin ay siinaysa 20kii sano ee lasoo dhaafay.
Wasiirka Difaaca Xukuumadda Afghanistan oo si dirqi ah uga badbaaday weerar lagu dili rabay.
0 Wednesday August 04, 2021 - 12:08:04
Dagaalyahanno aad u hubaysan oo katirsan Xarakada Jihaadiga ah ee Taliban ayaa weerar si aad ah loosoo qorsheeyay ku qaaday goob ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta ugu saraysa wasaaradda difaaca xukuumadda Camilka ah.
Saraakiil katirsan Melleteriga Yemen oo lagu dilay gobolka Ma'rib.
0 Tuesday August 03, 2021 - 18:08:48
Wararka ka imaanaya wadanka Yemen ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaanno dhaca waqooyi bari wadankaasi.
Weerar 15 Askari lagu dilay oo ka dhacay dalka Niger.
0 Monday August 02, 2021 - 11:52:59
Khasaara dhimasho iyo dhaawa leh ayaa ka dhashay weerar culus oo ka dhacay mid kamida dowladaha dhaca mandiqadda saaxilka qaaradda afrika.
Madaxweynaha Tuunis oo ku dhawaaqay in uu lawareegay hay'adaha Fulinta dowladda.
0 Monday July 26, 2021 - 11:28:43
Go'aan mar la arag ayuu qaatay madaxweynaha dalka Tuunis kadib markii uu iclaamiyay in uu talada fulinta wadanka lawareegay.
Baarlamaanka Faransiiska oo meel mariyay qaanuun halis ku ah Muslimiinta.
0 Sunday July 25, 2021 - 17:09:37
Baarlamaanka dowladda Faransiiska ayaa cod aqlabaliyad leh ku ansixiyay qaanuun gaaleed ka dhan ah islaamka iyo ehelkiisa.
0 Wednesday July 21, 2021 - 16:58:07
Fagaare weyn oo kuyaal degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxaa ka dhacay fantasyo ballaaran oo qeyb ka ah dabaal degyada munaasabadda Ciidul Adxaa.
0 Monday July 19, 2021 - 11:48:59
Warbaahinta dalka Denmark ayaa ku dhawaaqday in uu dhintay malcuunkii caanka ku ahaa aflagaadada Nabiga SCW kaasi oo ka caraysiiyay umadda milyaarka muslimka ah.
Dhimashada ka dhalatay Roobabka Jarmalka ku dhuftay oo 103 ruux gaartay.
0 Saturday July 17, 2021 - 12:15:35
Waxaa sare ukacay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay roobab daadad wata oo ku dhuftay gobollo katirsan dalka Jarmalka.
0 Thursday July 15, 2021 - 18:31:10
Wararka ka imaanaya wadanka Jarmalka ayaa sheegaya in labaatameeyo qof ay dhinteen halka tobanaan kale lala'yahay kadib markii ay wadankasi ku dhufteen roobab daadad wata.
« Prev1234567 ... 51Next »